I-Top 10 testosterone ester: okulungile kuwe? | | I-AASraw
/Blog/Gallery/I-Top 10 testosterone ester: okulungile kuwe?
Posted on 12 / 18 / 2018 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
I-testosterone esters ingachazwa njengamakhemikhali okwenene e-testosterone aqukethe amaketanga e-carbon ahlanganiswe kuwo. Amaketanga e-carbon alawula i-coefficient yokuhlukanisa, ngokwemigomo elula ukutholakala komuthi emzimbeni wakho. I-solubility yesidakamizwa emanzini inqunywe ubukhulu be-carbon chain i-ester iqukethe. Ikhefu elide lekhabhoni lihumusha ku-ester elide futhi isikhathi esiningi siyi-ester, kancane kancane ukuxazululwa kwemithi emanzini. Ngokwesibonelo, i-testosterone propionate i-ester eyenziwe ngamaketanga amathathu e-carbon ccc. Ngokuvamile, lokhu kusho ukuthi kukhona amaketanga amathathu e-carbon kulokhu i-testosterone ester.
Wisikebhe is testosterone esters?
Isihloko se-testosterone ester sididekile kubantu abaningi, futhi awukwazi ukuthola incazelo ecacile ngaphandle kwemininingwane eningiliziwe enikezwe izazi eziningi. Ngamazwi alula, udinga kuqala ukuqonda ukuthi yini i-ester ngaphambi kokuhamba ukuyihlanganisa ne-hormone ye-testosterone. I-Ester yindlela yokwenza amakhemikhali eyenziwe yinye, ezimbili noma ezintathu zamaketanga. Ubukhulu be-ester empeleni kubangelwa inani lezinketho zekhabhoni ezitholakalayo. Manje ungasebenzisa i-theory efanayo ukuze uqonde ama-ester testosterone. Njengoba kuchaziwe ngenhla ama-esters amancane anezinketho ezimbalwa zekhabhoni ezithandana kakhulu emanzini kanye negazi kanye.
Umzimba wakho ungenza umthamo we-testosterone wemvelo okuyiwona ophethwe ukushayela ucansi kanye nokwakhiwa kwemisipha. Kubantu abane-testosterone ephansi yokukhiqizwa ngenxa yezizathu ezehlukene zezempilo, bangahamba ngomuthi we-testosterone. Lapha udokotela angakwazi ukunikeza izidakamizwa eziningi ze-testosterone ester emva kokuthatha zizoxuba negazi lakho futhi zinike imiphumela efanayo emvelo. Njengoba ukhula, amazinga wokukhiqiza we-testosterone ahla. Amazinga e-hormone ngokuvamile aphakama ngesikhathi esakhula nokukhula.
Indlela Yokwenza I-Testosterone Cypionate Eliqediwe Kusuka Emagqumeni E-Radi Steroid
Lapho uneminyaka engu-35 nangaphezulu kwamazinga e-hormone e-testosterone emzimbeni aqala ukuwela phansi nakuba izifo ezifana ne-hypogonadism zingabangela. Imiphumela emibi ye-testosterone esters ihlukahluka kusuka kolunye uhlobo kuya kwesinye, kodwa iningi lihlanganyela nomthelela ofanayo. Ngokwesibonelo, ukuvuvukala indawo yokujola kuvamile uma usebenzisa izidakamizwa ezijova ngenkathi ezinye imiphumela zibandakanya ukuphathwa ikhanda, ukuqwashisa futhi ngezinye izikhathi ukukhipha isikhathi eside.
Kungani sidinga i-testosterone?
I-testosterone ebizwa ngokuthi i-hormone yesilisa. Abantu abaningi abangamazi ukuthi bobabili amadoda nabesifazane bakhiqiza i-hormone. I-Testosterone iyi-hormone ye-androgen eyenza izici zesilisa emzimbeni wakho. Kukhiqizwa endaweni eyodwa emzimbeni wakho bese uhambela kwezinye izingxenye zomzimba ngegazi. I-hormone ikhiqizwa ezindaweni ezilandelayo;
Kwabesifazane bakhiqizwa ngama-ovari
Ezingqungqutheleni ezitholakalayo ezitholakala ngaphezu kwezinso zakho ezitholakala kokubili amadoda nabesifazane.
Amazinga we-testosterone aphezulu kunamadoda kunabesifazane. Ukungalingani kwe-testosterone noma ubulili kungaholela emiphumeleni emibi engase ibe yimbi kakhulu uma inkinga ingelashwa ngesikhathi.
Imiphumela emihle Amandla ethuthukisiwe
I-Testosterone cypionate ne-testosterone enanthate
Isilinganiso sesilinganiso 250-750 ngesonto
Ukuphila okungaphelele 2-3 amaviki
Ukugcinwa kwamanzi Yebo
Action Imiphumela edikiwe
Imiphumela emihle Amandla akhula
Okuqhamuka uma udla imishanguzo Ukulahlekelwa izinwele, i-acne, ukugcinwa kwamanzi kanye ne-atrophy ye-testicular.
Protection Ithebhu eyodwa ye-Nolvadex ne-proviron nsuku zonke
Lokubuyisela Ithebhu ye-Clomid 1 ngezinsuku ze-20
I-Testosterone decanoate ne-testosterone Isocaproate
I-Testosterone decanoate 5721-91-5
Isilinganiso sesilinganiso 50-100mgs ngosuku
Ukuphila okungaphelele Decanoate, amasonto e-3-4
Amaviki angu-Isocaproate angu-2
Ukugcinwa kwamanzi Okuncane
Imiphumela emihle Amandla ethuthukisiwe, imisipha enzima namandla okuzuza.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo Ukulahleka kwezinwele, i-gynecomastia, i-acne ne-atrophy ye-testicular
Protection I-1 ithebhu ye-Nolvadex ne-Proviron kuwo wonke umjikelezo
Lokubuyisela Ithebhu ye-Clomid -1 nsuku zonke izinsuku ezingu-20 ngemuva kosuku lokugcina lokwelapha.
I-HCG 2500-5000IU masonto onke, i-XNUMdays ngemuva kosuku lokugcina lomjikelezo wakho wezokwelapha.
I-Testosterone engalingani (injectable)
I-Testosterone Undecanoate 5949-44-0
Ukuphila okungaphelele Kude kakhulu
Isilinganiso sesilinganiso Amaviki angu-1000mg / 14
Action Kude kakhulu
Imiphumela emihle Ukululama kangcono, ukususa okungcono kangako, amandla okwandisa, namandla amisipha
Okuqhamuka uma udla imishanguzo I-acne, ukulahlekelwa izinwele, i-atticphy testicular ne-gynecomastia.
Protection I-1 ithebhu ye-proviron ne-Nolvadex nsuku zonke kulo lonke umjikelezo wezokwelapha
Lokubuyisela I-Clomid - ithebhulethi eyodwa nsuku zonke ngezinsuku ze-20 ngemuva komjikelezo wokwelapha.
I-testosterone i-Phenylpropionate 1255-49-8
Isilinganiso sesilinganiso 250mg / masonto onke
Ukuphila okungaphelele 1-3 amaviki
Action Ngokushesha futhi esifushane
Imiphumela emihle Ukululama okungcono, amandla kanye nokuzuza kwemisipha, amandla ethuthukisiwe, nokususwa okungcono kangcono.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo Ukulahlekelwa izinwele, i-acne, i-gynecomastia ne-atrophy ye-testicular.
Protection I-Proviron ne-Nolvadex - ithebhu ye-1 / usuku phakathi nomjikelezo wakho wezokwelapha
I-Clomid- 1 ithebhu nsuku zonke izinsuku ezingu-20 ngemuva komjikelezo
I-HCG- thatha noma yiliphi isilinganiso esivela ku-2500-5000 IU njalo ngesonto ngezinsuku ze-20 ngemuva komjikelezo wakho.
Yiziphi izici ze-testosterone ze-10 eziphezulu?
Isixazululo se testosterone esingalingani ukufuna usizo lwezokwelapha emtholampilo oseduze nawe. I-testosterone esters yizidakamizwa ezijwayelekile ezisetshenziselwa ukuphatha testosterone yakho ephansi kanye nokwakhiwa kwemisipha. Kunezinhlobo ezihlukahlukene ze-testosterone esters ezitholakalayo emakethe, kodwa-ke, musa ukuzithenga kuphela phezu kwe-counter, thola isigwebo esivela kudokotela wakho. I-testosterone ester isetshenziswa ikakhulu ngabagijimi nabazimba bomzimba abafuna ukwakha imisipha yomzimba wabo. Ezinye ze-testosterone esters ezihamba phambili zilandelayo;
I-Testosterone Acetate ingenye ye-testosterone esters yokuqala ezokwethula emkhakheni wezokwelapha. Kwabekwa okokuqala okokuqala ku-1936. I-testosterone acetate yisidakamizwa esheshayo esiza ngesimo se-hormone yamadoda esilisa. Ihlakaza ngokushesha emzimbeni wakho wegazi okwenza kube kuhle kweziguli eziningi noma abagijimi. Ngesicelo, i-acetate ester iqala ukusebenza ngokushesha ngokuphambene namanye ama-ester testosterone angase athathe isikhathi. Ngenxa ye-testosterone encane ehlola impilo encane, uzodinga ukuthatha imithi ephansi emva kwe-2 kuya kwezinsuku ezingu-3 ukuze ugcine amazinga we-testosterone afana nokushintshashintsha.
I-Testosterone i-acetate injection ingase ibe buhlungu futhi ingabangela ukuvuvukala noma ukungakhululeki ezindaweni zokujova. Abasebenzisi abasha bazohlale bezwa ubuhlungu isikhathi esithile, kodwa ngemva kokuba umzimba wakho usebenzise izilinganiso, uzobe uhamba kahle. Kodwa-ke, uma imiphumela iqhubeka, chaza udokotela wakho ukuthi ahlinzekele okunye okukhethwa kukho.
Testosterone Aisilinganiso se-cetate
Isilinganiso se-testosterone acetate kuxhomeke emgqeni kadokotela wakho ngemva kokuhlola isimo sakho. Noma kunjalo, ukulinganisa okujwayelekile kuya kusuka ku-100mg, i-200mg, i-500mg, ne-1000mg kodwa Khumbula kuphela isilinganiso esilungile sizoletha imiphumela oyifunayo. Umthamo kufanele uhlukaniswe udokotela wakho, noma ngesonto noma ngosuku ngalunye emva kokuhlolwa kwezokwelapha. Abanye abantu bayodinga kuphela ukulinganisa amancane ngenkathi abanye benwebeka imithi kuyokwanela. Ungathengi izidakamizwa ngaphandle kweseluleko sikadokotela wakho ngoba kungase kuholele emiphumeleni emibi ye-testosterone acetate. Uma ngabe ungumdlali ungaya ngesakhiwo somzimba se-testosterone acetate esizokusiza ukuba uthuthukise imisipha yakho nomzimba womzimba.
I-Testosterone Acetate Ukwakha umzimba
Nge-CAS CHA: 1045-69-8, i-testosterone acetate iphakathi kwe-steroid esebenza ngokushesha kunazo zonke emakethe okwamanje eyinqobe izinhliziyo zabaningi bomzimba abaqeqeshiwe. Isidakamizwa siqala ukusebenza ngokushesha ngemuva kokuthatha umthamo wakho. Lokhu kubangela ukukhiqizwa kwamahomoni amaningi e-testosterone emzimbeni wakho osiza izicubu ezihlukahlukene ukuba zikhule zihlanganisa imisipha yakho futhi ishise amafutha. Njengomgqugquzeli womzimba, uzodingeka futhi uhambisane nomthamo ngokuzivocavoca nokudla okufanele ukuze uthole imiphumela efunayo. Isidakamizwa sikhona kokubili amazwi ngomlomo nangenjojo kuye ngokuthi. Ngakho-ke kukuphezu kwakho, ukunquma ukuthi iyiphi indlela okungcono kakhulu kuwe. Nokho, udokotela wakho uzoba umuntu ongcono kakhulu ukukusiza wenze isinqumo esifanele ngemuva kokuhlolwa kwezokwelapha.
I-Testosterone Acetate Ingxenye ukuphila nomjikelezo
I-testosterone acetate ibe phakathi kwezidakamizwa ezisebenza ngokushesha kunazo zonke ezinezinkathi zokuphila kwe-2 ezinsukwini ezingu-3 nomjikelezo wokwelashwa okungaphezulu kwamaviki angu-12. Udokotela uzofika ngesilinganiso esihle kakhulu somjikelezo we-testosterone acetate kuye ngesimo sakho sempilo nezidingo zakho. Kukhona futhi inketho yokulinganisa nsuku zonke nesonto onke, tshela udokotela wakho ukuthi ukhululekile yini, futhi uzokusiza. Ungasebenzisa futhi izidakamizwa kanye nezinye izinto ezifana neProviron ukunciphisa umthelela wemiphumela emibi.
I-Testosterone Acetate Izinzuzo
Ezinye zezinzuzo ezinkulu ze-testosterone acetate yilokho;
Yenza ngcono ukukhula kwemisipha
Kuthuthukisa ukuvuselelwa kwamathunjwa kanye nesisindo
Thuthukisa ukusebenza komzimba jikelele
2. I-Testosterone cypionate
Lesi yisidakamizwa sokuzivikela ongakwazi ukujova emisipha yakho emva kokuboniswa ukuthi ungayenza kanjani nodokotela wakho. I-Testosterone cypionate yokudayiswa ivela ngaphansi kwegama lomkhiqizo uDepo-Testosterone, futhi ungayithola ezinkundleni ezihlukahlukene ze-intanethi noma esitolo sakho sezokwelapha. Ezimweni eziningi, izidakamizwa zilawulwa uhulumeni ngenxa yamandla nemiphumela emibi engase ibangele uma ingasetshenziswa kahle.
I-Testosterone cypionate ene-CAS Inombolo 58-20-8, yasungulwa ngasekupheleni kwe-1940 kodwa yatholwa ukusetshenziswa kwezokwelapha ku-1951. Ngaphandle kokusetshenziswa kwezokwelapha, lesi sidakamizwa siba usizo olukhulu kubagijimi nabazimba. Ikhuthaza ukukhiqizwa kwama-hormone e-testosterone emzimbeni okubalulekile ekuthuthukiseni nasekuthuthukiseni ukukhula kwamasipha kanye nokuhlinzeka umzimba ngamandla. Kuye ngezidingo zakho, isidakamizwa senzelwe umjovo okungenani kanye nanye kuzo zonke i-1 kuya kumaviki angu-4. Kunconywa ukuthi uhambe ukuhlolwa kwezokwelapha ukuze ukwazi umthamo ofanele wesimo sakho noma izidingo zakho.
I-Testosterone Cypionate indlela yokwenza
I-testosterone cypionate imiphumela zifana nazo zonke ezinye izidakamizwa eziseklasini lika-androgen. I-steroids kule nkampani yezokwelapha isebenza ngendlela efanayo futhi iphathe izimo ezifanayo. I-testosterone cypionate iyilungele ukwelashwa kwe-hypogonadism emadodeni kusukela ibeka esikhundleni se-testosterone ukuthi umzimba wakho awukwazi ukuveza. Udokotela wakho angabeka kalula umjovo we-testosterone cypionate emva kokuhlola isimo sakho. Eminye imiphumela emibi ejwayelekile oyothola ngemuva kokusebenzisa lesi sidakamizwa yizinhlungu noma ukuvuvukala ezungeze indawo yokujova, ukuvinjelwa okwesikhashana, kanye nezinsizwa phakathi kwabanye.
The amanani e-testosterone cypionate zihluka kusuka kumthengisi oyedwa kuya kwesinye, ngakho-ke ucwaningo lwakho kuqala ukuthola umdayisi onokwethenjelwa futhi othembekile onganikela ngemithi yesidakamizwa ngentengo enengqondo. Udokotela wakho futhi angadlala indima ebalulekile ekusizeni ukuba uthole umthamo we-testosterone we-cypionate umthamo ngenani elingabizi. Ukuthatha umthamo wokudakwa ngokweqile kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu, ngaleyo ndlela qinisekisa ukuthi ulandela iseluleko sikadokotela wakho.
I-Testosterone Cypionate Isikali
Lesi yisidakamizwa esingenakulungiswa esinomthamo we-testosterone cypionate we-200 kuya ku-800mgs ngesonto. Udokotela wakho uzobeka umthamo ofanele ngokuya ngezinga lakho lomjikelezo nokuthi yini ofuna ukuyifinyelela ekupheleni komjikelezo. Umjovo kufanele uhanjiswe ngokusebenzisa imisipha yakho yezingalo noma ngaphezulu. Udokotela wakho anganikela ngeviki noma nge-biweekly, noma ungaya futhi umthamo wenyanga.
I-Testosterone Cypionate Ingxenye ukuphila
I-Testosterone cypionate steroid inomsebenzi osebenzayo kuze kube yizinsuku ze-8 futhi ingenye yezinto ezithandwayo ezithandwayo ezisetshenziselwa izici zomzimba. Umjovo we-testosterone cypionate kufanele uthathwe ngezikhathi zezinsuku ze-7 ngemiphumela engcono.
I-Testosterone Cypionate Ukwakha umzimba
Isidakamizwa siyisongezo esihle kunazo zonke zomzimba kanye nabagijimi abazayo nalabo abanolwazi. I-testosterone cypionate inikeza umzimba wakho amandla anele ukuze uthole ukuqeqeshwa okukusiza ukuba ufeze umsimba nomzimba oyidingayo. Uma ubheka imiphumela efinyelelwe ngabasebenzisi bokuqala yalesi sidakamizwa ngemuva kokusungulwa, ungaqiniseka ukuthi lokhu yisidakamizwa esinika ithuba lokuzikhandla emsebenzini wakho wokwakha umzimba. Nokho, ukuze uhlangabezane nemigomo yakho, kufanele uhambisane nomuthi ngokudla okufanele nokusebenza kahle.
I-Testosterone Cypionate Izinzuzo
Abaningi bomzimba abaqeqeshiwe abanjengeli steroid ngoba linikeza imiphumela yekhwalithi futhi isikhathi eside kakhulu. Ungakhetha ukuhamba umthamo wenyanga yonke ikakhulukazi uma ungakhululekile ngama-injection wamasonto onke. Okunye izinzuzo ze-testosterone cypionate faka;
Usizo ekulondolozeni imisipha emnandi
Ukugqugquzela ukukhula kwemisipha
Ukunikeza isisombululo sokwakha umzimba isikhathi eside
3. I-testosterone decanoate
Uma ufuna i-supplement ezokusiza ukwakha imisipha yakho, ikunike amandla futhi ushise amafutha omzimba wakho bese kuthiwa i-testosterone decanoate ngumkhiqizo ofanele. Kodwa-ke, udinga ukuqonda ukuthi i-testosterone ivela ngamafomu ahlukene futhi uhlobo olukhethayo lungaba nethonya elikhulu empumelelweni yakho jikelele emigomeni yakho. Abasebenzisa umzimba abaningi basebenzisa I-TESTOSTERONE I-STANOIDS E-DECANOATE ukuqala i-androgen receptors emzimbeni. Lesi sidakamizwa siphinde sinikeze izinzuzo ezehlukene ezifana nokusiza ukuthuthukisa ukushayela ucansi ngamadoda ane-erectile ukungasebenzi. Ukuze ukukhula kwemisipha nokusimama, lo muthi usebenza umlingo uma ulandela isilinganiso esifanele nokudla.
I-Testosterone decanoate ithola ukuthandwa kwayo ngenxa yemiphumela emihle ehlinzeka kubasebenzisi. Ekuqaleni, lesi sidakamizwa sisetshenziselwa ukuxazulula izinkinga eziphansi ze-testosterone kumadoda, ngaphambi kokuthi kuqaphele ukuthi ingasiza abaqashi bomzimba ukuba bathole imigomo yabo. Iqiniso lokuthi umthamo wezidakamizwa ungafakwa kuphela kanye ngesonto ukwenza kube yizintandokazi kubaningi bomzimba abaqeqeshiwe abangathandi umlomo we-dosage steroids. I-testosterone decanoate iyisidakamizwa esihle kakhulu esisiza ekwandiseni amangqamuzana abomvu egazi emzimbeni. Sekuyiminyaka eminingi kusukela kusungulwa kwalesi sidakamizwa, kubonakala kube yisisombululo esingcono emithonjeni eminingi ephansi ye-testosterone kokubili amadoda nabesifazane.
WIsikhwama se-Testosterone decanoate?
I-Decanoate iyi-ester, futhi njengoba kuchazwe ekuqaleni kwalesi sihloko, i-ester iyinhlanganisela yezinto eziphilayo ezisiza nge-pharmacokinetics kwanoma iyiphi into. Ngamazwi alula, kusiza ekuthwaleni lesi sidakamizwa emzimbeni wakho futhi kunethonya elibalulekile endleleni elithinta ngayo umzimba wakho. U-Ester unquma isigamu sokuphila kwanoma imuphi umuthi nokuthi uzohlala isikhathi eside kangakanani esimisweni somzimba wakho. I-Testosterone decanoate bodybuilding unemizuzu emibili yezinsuku ezingu-7, okusho ukuthi uzodinga kuphela ukujova umuthi kanye ngesonto. Lokho kusho ukuthi i-testosterone iyafana ne-deca iyisidakamizwa esihle kakhulu samadoda abhekene nobunzima ekulondolozeni imisipha eminyene.
I-Testosterone Decanoate Half ukuphila
Ngemuva kokuthatha umthamo wakho umuthi uhlala usebenza emzimbeni wakho nge-7 ezinsukwini ezingu-10. Ngakho-ke, umthamo kufanele uthathwe okungenani kanye ngesonto. Landela imiyalelo kadokotela ngemiphumela engcono futhi ufeze imigomo yakho ngokushelela.
Testosterone Decanoate Isikali
Ngezinhloso zomzimba isiphakamiso esinconywayo se-testosterone esinqunywe kusuka ku-250mgs kuya ku-1000mgs ngesonto. Kwabaqalayo bathatha i-250-500gms ngeviki kuzoba kuhle kodwa umthamo unganyuswa emjikelezweni olandelayo. Ukudla okulungile kanye nokuzivocavoca kuzoba kuhle ekufezeni imiphumela esiphezulu nezinzuzo.
I-testosterone decanoate izinzuzo
Izinzuzo eziyinhloko ze-testosterone decanoate oyozijabulela ngokusebenzisa le mithi ngokufanele zihlanganisa;
Hlanganisa kakhulu ekugqugquzeni ukukhula kwemisipha
Thuthukisa futhi ugcine imisipha emnandi
Thuthukisa amandla omzimba jikelele noma amandla.
Ngakolunye uhlangothi, i-testosterone decanoate ne-cypionate ingasebenza ngokufanayo futhi inikeze umphumela ofanayo, kodwa umehluko ufika engxenyeni yokuphila. Ku-testosterone decanoate, uzodinga kuphela ukujova umthamo owodwa ngeviki ngenkathi u-cypionate kuzodingeka ujobe okungenani kanye ngezinsuku ezimbili noma ezintathu. Umthelela ovuthiwe obalulekile nalesi sidakamizwa ukuthi kunganciphisa ukukhiqizwa kwemvelo ka-testosterone emzimbeni wakho okusho ukuthi umzimba wakho ngeke ukwazi ukwakha imisipha edingekayo ngemuva kokuqeda umjikelezo wezidakamizwa. Kuncike emandleni akho omzimba, ungase ube nemiphumela emibi ehlukile engase ibe nzima ngezinye izikhathi uma ungasebenzisi umthamo ofanele. Ngokwesibonelo, ungase uzwe ukujuluka okungavamile, ukuleleka noma i-acne ngezinye izikhathi. Njalo ulandele imiyalelo kadokotela wakho futhi uma kwenzeka noma yimuphi umphumela omubi umtshele.
4. I-testosterone enanthate
Lesi yisidakamizwa somjovo esilungele ukuphatha izimo ezibangelwa yi-testosterone ephansi njengokungakwazi ukukwakha imisipha, ukungabi namandla noma ukulibazisa ukukhulelwa kanye nokunye ukungalingani kwe-hormone. Udokotela kufanele anikeze umuthi we-testosterone enanthate kusukela ekusetshenzisweni kabi kwawo kungaholela emiphumeleni engavumeleki.
I-enanthate ye testosterone iphakathi kwe-anabolic steroids eyaziwa kakhulu kunazo zonke kusukela ekukhululweni kwayo emakethe ku-1930s. Kuze kube manje, lesi sidakamizwa siyaqhubeka sibe phakathi kwe-steroid ethandwa kakhulu yizici eziningi zomzimba nabadlali abaningi. Ekuqaleni, i-steroid yayingathintwa kunoma yikuphi u-ester okwenza isidakamizwa sitholakale ngokushesha egazini. Ku-1937, umkhiqizi waqala ukuhlanganisa umuthi nama-ester amakhemikhali owashintsha cishe yonke into kule steroid. Ngonyaka we-1950, umkhiqizi wezidakamizwa wanquma ukufaka i-enanthate ester compound emthini owenza izidakamizwa ezinikeza amandla abantu abaningi abazithokozisa umzimba namuhla.
I-Testosterone enanthate i-250 yiyona emaphaketheni ejwayelekile yezidakamizwa ozothola emakethe. Kodwa-ke, umthamo ungenziwa ngokwezifiso udokotela wakho emva kokuhlola isimo sakho. Kubantu abagijimi, lesi sidakamizwa esingenakulungiswa ngeke sikusize ekuthuthukiseni ukusebenza kwakho, kodwa kuyokusiza ukuba ufeze imiphumela yakho oyifunayo. I-testosterone ye-enanthate bodybuilding kusiza ukuqala imisipha yakho nokulawula amafutha emzimbeni wakho. Njengoba uqhubeka nokuzivocavoca umzimba kwakho njalo, uzothola imisipha nesimo somzimba oyifunayo. Uma kwenzeka uhluleka ukuthola imiphumela engavamile, xhumana nodokotela wakho ukuze uthole usizo.
I-Testosterone enanthate yokudayiswa iyatholakala kuma-pharmacy ahlukahlukene, nezitolo ze-intanethi, noma kunjalo, uthenge lesi sidakamizwa ngaphansi kweseluleko sakho sezempilo sezempilo. Imiphumela yezidakamizwa inobungozi uma uyiqedile noma uyisebenzisa kabi futhi ayikwazi ukuguqulwa. Ukuze ube ohlangothini oluphephile, udokotela wakho akunikeze umthamo olungile. Ngemuva komjikelezo we-testosterone enanthate kufanele ukwazi ukubona imiphumela, futhi uma ungaboni, chaza udokotela wakho.
I-testosterone i-Enanthate Isikali
Odokotela abaningi bakhetha umthamo we-testosterone enanthate owodwa ngokwemvelo nakuba izidakamizwa zifika ngamanani ahlukene. Isibonelo, imithi yokwelashwa isatshalaliswa ngokuvumelana nemigomo ofuna ukuyifinyelela ngaphezulu uma ungumakhi womzimba - isilinganiso esilinganiselwe salolu hlu lwezidakamizwa kusuka ku-250mg ngosuku kuya ku-750mgs ngesonto. Kwezinye izimo, izici ze-bodybuilders zithatha isilinganiso esiphezulu se-1000mgs masonto onke. Isilinganiso singabuye sinqunywe ngezinga lakho lomjikelezo, ngoba izinyathelo eziphansi zaqalayo zinconywa ezingakhuliswa kamuva.
I-testosterone i-Enanthate Half ukuphila
I-enanthate ye-Testosterone ine-half-life esebenzayo yezinsuku ze-10.5, futhi kufanele uthole umjovo wesilinganiso sakho ngemuva kwezinsuku ze-10. Kodwa-ke, udokotela wakho angaklama isitifiketi esifanele samasonto onke okuzokwenza ukwazi ukuthola amandla nokwakha imisipha.
I-testosterone i-Enanthate Umjikelezo
I-testosterone enanthate inemijikelezo ehlukahlukene ngokuya ngezinga lakho, kanti udokotela wakho uzoba sesikhundleni esiphelele sokuklama okuhle kakhulu kuwe. Isibonelo, umjikelezo wokuqala we-testosterone wokuba nomzimba uhlanganisa ukusetshenziswa kwamanani amancane nezinye izinto ezifana no-Arimidex no-Deca-Durabolin. Umjikelezo osengaphambili ongujikelezo wesibili, amanani akhuphuka emva kokuba umzimba wakho usebenzise izilinganiso zokuqala. Isidakamizwa lapha sisetshenziswa kanye no-Dianabol 40mgs ngosuku ngalomjikelezo wonke. Umjikelezo we-Hardcore yizinga eliphakeme elihle kakhulu kubasebenzisi base-Testosterone abanomzimba wokunciphisa amandla, futhi lapha amanani aphakeme kakhulu.
Izinzuzo ze-testosterone enanthate
Lesi sidakamizwa siboniswe ukuba sidlale indima ebalulekile ekuthuthukiseni imisebenzi yabasebenzi bomzimba nabagijimi. Uma kuthathwe kahle imithi inganikeza imiphumela ehlukahlukene, izinzuzo ze-testosterone ezinamaphilisi ezihlanganisa;
Ukwandisa nokuthuthukisa ukukhula kwemisipha
Thuthukisa ama-tissue alulame ngemuva kwengozi noma elula ngesikhathi sokusebenza.
Ukwandisa amandla omzimba jikelele namandla okusiza abagijimi nabazimba bomzimba bafeze imigomo yabo yokusetha.
Bhisa amafutha emzimbeni futhi usize amalungu omzimba ukuze athole isimo somzimba abayidingayo.
5. I-Testosterone phenylpropionate
I-Testosterone phenylpropionate (i-BAN) (igama lomaka Testolent), noma i-testosterone phenylpropionate, okunye okubizwa ngokuthi i-testosterone hydrocinnamate, i-anabolic-androgenic steroid eyenziwe (I-AASraw) kanye ne-androgen ester - ngokucacile, i-estosterone ye-C17β phenylpropionate - eyake yaphakanyiswa e-Romania. Yethulwa okokuqala emibhalweni yesayensi ku-1955 futhi yayiyingxenye yezinto ezimbalwa zebhizinisi le-AAS ezihlukanisiwe, kodwa azizange zisetshenziswe kabanzi. I-Testosterone phenylpropionate nayo yayingumngane weSustanon no-Omnadren.
I-Testosterone phenylpropionate yaqala ukukhishwa emakethe ku-1955 ngeSicomed Pharmaceutical house kodwa yayithengisa ngaphansi kwegama elithi Testolent. Isidakamizwa asikatholakali ngisho nasemakethe emnyama ngemuva kokukhishwa. Kodwa-ke, eminyakeni yamuva itholakale futhi yamukelwe kahle ngabakhi bomzimba kanye nabadlali. Isidakamizwa siyingxenye yamanye ama-testosterone amaxhama afana ne-Omnadren.
I-Testosterone phenylpropionate yimithi efakwa eqenjini le-androgens yezidakamizwa. I-Testosterone phenylpropionate iyisidakamizwa okufanele isetshenziswe ngomjovo. Ngemva komjovo, umuthi uhlala usebenza cishe izinsuku ezinhlanu lapho ungathatha elinye umthamo. Isidakamizwa singasetshenziswa ngokuzimela noma sinikezwe nezinye izilingo ze testosterone zezokwelapha ze-testosterone esigulini esinokuqinisekiswa okuqinisekisiwe kwe-testosterone. Ngakolunye uhlangothi, lolu hlelo lokusebenza oludumile lwezidakamizwa lungcono ekuthuthukiseni amandla omzimba kanye namandla omzimba.
I-trademark enhle abasebenzisi okufanele bacabange ngalezizinto yilokho ukusabela okunjalo ukugcinwa kwamanzi kubonakala kuphela ngezikhathi ezithile. Ukwengeza, ngokuthatha u-testosterone phenylpropionate, izici ze-bodybuilders zibika ukukhula kwesifiso, amandla nokukhwalithi. Konke ngokusebenzisa lolu hlobo lwe-testosterone ngendlela efanele imithelela ifana nelinye lama-testosterone esters kodwa akudingi ukuvakashela izifo ezincane, noma kubangele ukugcinwa kwamanzi.
Izinzuzo ze-Testosterone phenylpropionate
Lesi testosterone steroid sesitholile ukuthandwa phakathi kwabalimi bomzimba ngenxa yemiphumela emihle emzimbeni. Ezinye zaziwa izinzuzo ze testosterone phenylpropionate faka;
Ukwandisa ukwakha imisipha ngokuthuthukisa amandla okugcina i-nitrogen.
Ukukhuthaza amandla omzimba wonke, ngaleyo ndlela kwenza abagijimi bakwazi ukusebenza isikhathi eside futhi bathole imiphumela efunayo. Liphinde ithuthukise ukusebenza jikelele komakhi womzimba nomdlali.
Ukukhuthazwa kwamaseli obomvu ekhiqizwa emzimbeni.
Nciphisa futhi ushise amafutha omzimba.
I-Testosterone Phenylpropionate Half ukuphila
I-Testosterone phenylpropionate iyisidakamizwa esingenayo injabulo yokuphila kwe-3 ezinsukwini ezingu-4. Kuzodingeka uthathe umthamo wakho kanye ngezinsuku ze-4. Udokotela wezempilo kufanele aqondise umjovo.
Isilinganiso se-Testosterone phenylpropionate
Abagijimi abaningi noma izakhi zomzimba zisebenzisa lesi sidakamizwa kabili ngesonto noma emva kwezinsuku ezimbili. Ilungelo umthamo we-testosterone phenylpropionate amabanga kusuka ku-300gm kuya ku-3000mg ngesonto. Kodwa-ke, imiphumela emibi ye-testosterone phenylpropionate ayinamandla kakhulu uma kuqhathaniswa nelinye le-steroids.
I-testosterone i-Phenylpropionate Umjikelezo
I-testosterone phenylpropionate steroid ingasetshenziswa kanye namanye ama-esters amancane okwedlula umjikelezo we-10-ngesonto. Umjikelezo we-testosterone phenylpropionate omuhle kakhulu kufanele uhlanganise umjikelezo wokuhlola ophethe umthamo we-300mg ngesonto kanye ne-NPP yakudala ene-dose ephakanyisiwe ye-300mg ngesonto futhi. Umjikelezo omfushane kufanele ube ngaphansi kwamasonto ayishumi abaqashi bomzimba.
6. I-Testosterone Isocaproate
Isocaproate i-ester ehlanganiswe ne-steroid anabolic. I-ester engakwazi ukuxhunyaniswa ngokufanayo ne-steroids njengeCypionate edumile noma Nciphisa esters. Njenge-Cypionate ne-Enanthate, i-Isocaproate nayo ingafakwa kwi-hormone ye-testosterone, noma kunjalo, ngenxa ye-Isocaproate, lokhu kuzoba yindawo eyinhloko esiyibona ijoyine. I-Testosterone-Isocaproate, isimo se-monoester esingakazwakala; ngethuba lokuthi uyitholile, kwakungekho cishe isimangalo sokuthi uhlelwe udumo, futhi akudingeki ukuthi uke ube ne-Testosterone Isocaproate njenge-ester eyodwa. Lapho sithola khona i-ester Isocaproate ngokuvamile futhi lapho isebenza ngenhloso ephakeme kum mix mix testosterone; ngokucacile i-Omnadren futhi I-Sustanon 250. I-Omnadren ne-Sustanon-250 yizo zombili testosterone ezihlanganiswa nama-esters amane afakwe; ama-ester amane ngobukhulu obuhlukahlukene abakha isakhi esisodwa se testosterone.
I-testosterone Isocaproate iyi-ester, futhi iyatholakala kuphela uma ifakwe kwi-steroids njenge-Omnadren no-Sustanon 250. Umlando wale ester ungalandelwa kusukela ku-1970 uma uSustanon 250 ikhishwa emakethe. Indima ye-Isocaproate ester ukuvumela ukuthi isidakamizwa sihlale isikhathi eside emzimbeni wakho futhi sivumele ezinye izinhlanganisela ze-steroid ukusebenza kahle. I-estocaproate ester inikeza i-steroids isigamu sempilo kusukela ezinsukwini ezingu-7-9.
I-Testosterone Isocaproate Isikali
Njengoba i-Isocaproate engekho ngokuzimela, isilinganiselwa se-testosterone isocaproate sincike kuye ngokuthi ihlanganisiwe kuphi. Isibonelo, ku-Sustanon 250 ukufakwa kwalesi sidla ngu-60mgs kanye nesilinganiso sezintambo ze-Sustanon 250 kusuka ku-250mgs kuya ku-1500mgms ngesonto. Udokotela wakho uzokunikeza umthamo ongcono kakhulu kuye ngezidingo zakho.
I-Testosterone Isocaproate Ingxenye ukuphila
I-Testosterone i-Isocaproate ine-half-life esebenzayo kuze kube yizinsuku ze-7-9 okusho ukuthi umthamo wanoma yiliphi i-steroid elifakwe nalesi ester kufanele lithathwe kanye ngesonto. Ngisho noma ugcwalisa umjikelezo wakho namuhla, uzoqhubeka nokujabulela imiphumela yezidakamizwa ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo.
Izinzuzo ze-testosterone Isocaproate zingase zisekelwe emathanjeni afana ne-Omnadren no-Sustanon 250 futhi ingahlukaniswa ngezigaba ezimbili ezifingqa; amandla atholakala yizici ezingenhla nokuthi yiluphi uhlobo lwe-compound lunikeza ngokuphambene nesimo esisodwa se-ester. Njengoba kuhlolwe esiteji sokuqala, amandla okuhlanganiswa kwe-testosterone ukuhlinzeka ngcono ama-univesithi amabili ngendlela encane futhi enamandla kakhulu, kanti lokhu kunikeza testosterone esebenza ngokusheshayo nemithelela ehlala njalo. Lokho kungase kuzwakale sengathi kuyinto elula kakhulu, kodwa iqiniso lendaba akulokho okwedlulela kulokho. Ngaleso sikhathi, sinezinzuzo ezithile kuye ngokuthi yiziphi izimfanelo ezingenhla, futhi njengoba u-Omnadren no-Sustanon 250 basebenziselwa ngokuphelele ukubulawa, sizobe sibheke ezingxenyeni zokukhanya.
Ngomdlali we-season-off, lowo muntu onethemba lokuthola ubuningi obukhulu bomzimba kanye nobunikazi, ubujamo obungenasisindo buyisinqumo esihle njengoba kuzobe kushintshe ngokuphelele izinhlangothi ezimbili. Ngaphezu kwalokho, ngokusabalalisa imvelo yemvelo, usukulungele ukuthola ukulingana okulingana nokunciphisa umzimba we-muscle kuya fat, futhi lokho kuyigugu. Izingxube ezifanayo zingasetshenziswa ukusika kanye; konke okucatshangelwayo, ukugcoba ngcono kuveza amandla amaningi okudla okunamafutha, futhi njengoba i-testosterone iyisisindo esikhulu sokulondoloza izicubu kuyisinqumo esihle kakhulu kunoma iyiphi inqubo yokusika.
Lona isestestest ester elifushane kunazo zonke eliqhakazile ngokushesha egazini legazi. Ngakho-ke, uma udinga umkhiqizo osheshayo, umlayezo we-testosterone propionate uzokukhetha kahle. Kodwa-ke, lesi sidakamizwa sinempilo engaphelele yosuku olulodwa. Ngakho-ke kuyodingeka ujobe imithi nsuku zonke kuze kufike umjikelezo. Izindleko zamanani we-Testosterone propionate kusuka kumthengisi oyedwa kuya komunye nomthamo owukhethayo. Ukuqhathanisa testosterone propionate vs i-cypionate, ngokuphathelene nokusebenza ungakhetha i-propionate njengoba isebenza ngosuku, kodwa kufanele uthathe umthamo wakho nsuku zonke.
Njengamanye ama-steroids, i-testosterone propionate yasungulwa kuma-1930 okuqala futhi ihlose ukusiza ukuthuthukisa amazinga we-hormone e-testosterone emzimbeni. Isidakamizwa manje sesithandwa emhlabeni wonke phakathi kwabagqugquzeli bomzimba ukuze kubonakale kubalulekile ekusizeni ukuba bafeze imigomo yabo. Sekuyimashumi eminyaka manje isidingo sokuthi izidakamizwa zikhuphuke zibheke izinzuzo ezinikezwa kubasebenzisi abandakanya ukuthuthukisa izinzuzo ze-testosterone njenge-muscle yokwakha. Amadoda afana nale hormone inikeza esinye isizathu sokufuna okuphezulu.
I-Testosterone Propionate Isikali
Umhloli we-testosterone propionate wokuqala ufuna ukuthi uqale ngezindlela ezincane ezivela ku-50-100mgs okufanele zijowe ngemuva kwezinsuku ze-2-3. Isilinganiso se-testosterone propionate samasonto onke kusuka ku-200 kuya ku-500mgs.
Isidakamizwa singabangela imiphumela emibi kakhulu yabaqalayo abaqala ukukhipha ngokweqile okokuqala. Udokotela wakho uzokunika isilinganiso esifanele ngemuva kokuhlola isimo sakho. Uzozwa umthelela we testosterone propionate ngaphambi nangemva ukuthatha. Khumbula njalo ukulandela imiyalelo yesilinganiso. Kodwa-ke, uma ungahambi kahle nomthamo wansuku zonke, ungahamba ngomjovo ohlala inyanga.
I-Testosterone Propionate Ingxenye ukuphila
Amaphilisi e-testosterone propionate anesigamu sempilo yamahora angu-24 kodwa i-gel engenayo igxile impilo esebenzayo kuze kufike kumaviki e-4. Udokotela wakho uzoklama izikhathi eziningana zokulinganisa ezizokwenza ukwazi ukuthola imiphumela oyifunayo.
Ngemva kokuba umuthi udedelwe emakethe ku-1930s. Ihlolwe futhi iqinisekiswe ukusiza ukuthuthukisa amandla omzimba kanye nokuthuthukisa isakhiwo semisipha. Isidakamizwa sinikeza imisipha izakhi ezifanele ukuze zikhule futhi uma umsebenzisi enza izivivinyo ezifanele angaqiniseka ukuthi uthola umzimba omningi okudingekayo emdlalweni. Ukuba khona kwama-hormone e-testosterone emzimbeni wakho kusho ukuthi uzoba nezinzuzo eziningi ngaphandle kwemisipha yokwakha njengokuthuthukisa komuntu wakho okufana nokujula izwi nokukhula kwezinwele ebusweni phakathi kwabanye abaningi.
Noma kunjalo, ukubonisana nodokotela wakho kuyoba yindlela ephephile kakhulu yokuthola imiphumela ye-testosterone propionate. Ukubamba noma ukuvuvukala nxazonke ezindaweni zokujola kuyinto evamile, kodwa kufanele kudlule emva kwesikhathi esithile uma umphumela ungashiyi bese ubuyela kudokotela wakho ngokushesha. Ukukwabelana ngezidakamizwa nezinye izici zomzimba kungaba yingozi ngoba ungaqiniseki ukuthi izidakamizwa zizosabela kanjani ngomzimba wakho. Ukuhlolwa kwezokwelapha kubaluleke kakhulu ngaphambi nangemva kokuthatha umthamo wakho we-testosterone propionate.
Testosterone propionate izinzuzo
Isiza ukuzuza imisipha emnandi
Ukukhuthaza ubulili besondo
Ukukhulisa imisipha yomzimba
Burn amafutha esiswini.
8. I-testosterone i-Sustanon 250
I-Sustanon 250 steroid iyisidakamizwa somjovo kubantu abahlukunyezwa ngokukhiqizwa kwe-testosterone yemvelo kanye namazinga abaphika izinzuzo eziningi. I-Sustanon 250 ivumela abasebenzisi ukuthuthukisa izici zesilisa abafisa njengokujulisa izwi labo, ukuqinisa imisipha ngisho nokukhula kwezinwele emzimbeni noma ezindaweni zobuso.
I-Sustanon 250 iyi-steroid eyakhiwe yi-Organon Company kuma-1970s ukusiza amadoda ukuthi imizimba yabo ayikwazi ukukhiqiza amahomoni e-testosterone anele. Lesi sidakamizwa sathola ukuthandwa esikhathini esincane kakhulu ngemva kokukhishwa emakethe ngoba saba yisixazululo sangempela kubagijimi nabaningi bomzimba. I-Sustanon 250 yenziwa ngokuhlanganisa i-testosterone ester ehlukile ye-4 efaka phakathi, i-30mg ye-testosterone propionate, i-60mg-testosterone phenylpropionate, i-100mg-testosterone decanoate, ne-60mg-isocaproate. Ukubunjwa kwenza umkhiqizo unamandla futhi awusizo kubo bobabili izici zomzimba nezinye izinkinga eziphansi ze-testosterone.
Ungayifaka kanjani i-Sustanon 250
Le injini yomjovo inganikwa kuphela ngesonto noma emva kwezinsuku ezingu-3 ngenxa yamandla ayo okwenza ukuthi isebenze emzimbeni wakho izinsuku ezithile. Kodwa-ke lesi sidakamizwa sivinjelwe yi-anti-doping agency, ngakho-ke akuyona into enhle kubadlali abasebenzayo. Ungafaka umuthi emisipha yakho ngokwakho noma uhlele ukuvakashela njalo emtholampilo ukuze uthole umjovo kudokotela wakho. Ukuphila kwengxenye yesidakamizwa kuguquguquka kakhulu okwenza kube lula kubasebenzisi abaningi kodwa njalo ubuke umthamo wokugwema imiphumela emibi.
Ngokuyinhloko, ngaphandle kwama-hormone e-testosterone okwanele emzimbeni wakho, kuyoba nzima ukufeza ubukhulu bomzimba obufisa njengomzimba womzimba. Kungakhathaliseki ukudla noma umsebenzi owenza nsuku zonke, kufanele ube nama-hormone wesilisa ukuze uthuthukise ukusebenza kwakho. Isidakamizwa sisebenza ngokugqugquzela umzimba wakho ukuba ukhiqize i-estrogen engaphezulu, ngaleyo ndlela uthole izinga lobuciko lobu testosterone. I-Sustanon 250 kusiza ekuxazululeni zonke izinkinga ezibangelwa amazinga aphansi e-testosterone kufaka ukwakha nokulondoloza imisipha ebuhlungu.
I-testosterone i-Sustanon 250 Isikali
I-Sustanon 250 isilinganiso esilinganiselwe sabasebenzi bomzimba kufanele ivela ku-250mgs -1500mgs ngesonto. Noma kunjalo, i-500-750mg iyinsalela ejwayelekile yokujova ngeviki. Abanye abantu bangase bazizwe bengakhululekile ngegciwane le-Sustanon 250 ngemuva kwezinsuku ezintathu kodwa ukuya kwesilinganiso sempelasonto kuzoba umqondo omuhle.
Yiziphi izinzuzo ze-Sustanon 250?
Ukuzuza okubaluleke kunazo zonke oyokujabulela emva kokusebenzisa lesi sidakamizwa yi-testosterone eqhubekayo amasonto amathathu emva kokujola. Okusho ukuthi uzothola amandla omzimba adingekayo kanye ne-sex drive enkulu phakathi kwamanye ama-testosterone. Ngakolunye uhlangothi, uma usebenzisa lesi sidakamizwa isikhathi eside, kudingeka uhlole ukuhlolwa kwegazi ukuqapha amazinga akho e-testosterone. Khumbula amazinga we-hormone aphansi noma amaningi angaba yingozi. Enye inzuzo enkulu ozothola ngokuthatha lesi sidakamizwa iqinisa futhi igcine imisipha eminyene.
I-testosterone i-Sustanon 250 nowe
Imijikelezo ye-Sustanon 250 ihlanganisa ezinye izitshalo ngoba awukwazi ukuthola imisipha ewudingayo oyidingayo, ngokusebenzisa iSustanon kuphela. Nasi umjikelezo we-Sustanon wokuxosha;
Iviki I-Sustanon250 Dianabol Ostarine
I-MK-2866 Aromasin N2 I-Deca Durabolin
1 500mgs / ngesonto 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed I-7caps / ed 600mgs / ngesonto
2 500mgs / ngesonto 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed I-7caps / ed 600mgs / ngesonto
3 500mgs / ngesonto 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed I-7caps / ed 600mgs / ngesonto
4 500mgs / ngesonto 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed I-7caps / ed 600mgs / ngesonto
5 500mgs / ngesonto 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed I-7caps / ed 600mgs / ngesonto
6 500mgs / ngesonto 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed I-7caps / ed 600mgs / ngesonto
7 500mgs / ngesonto OFF 25mgs / ed 25mgs / ed I-7caps / ed 600mgs / ngesonto
8 500mgs / ngesonto OFF 25mgs / ed 25mgs / ed I-7caps / ed 600mgs / ngesonto
9 500mgs / ngesonto OFF 25mgs / ed 25mgs / ed I-7caps / ed 600mgs / ngesonto
10 500mgs / ngesonto OFF 25mgs / ed 25mgs / ed I-7caps / ed 600mgs / ngesonto
11 500mgs / ngesonto OFF 25mgs / ed 25mgs / ed I-7caps / ed 600mgs / ngesonto
* ed kusho nsuku zonke / ngosuku
9. I-Testosterone Undecanoate
Lesi yisidakamizwa esisebenza isikhathi eside esiza noma i-capsule noma ifomu lokujola. Ukuzikhethela kuhlale kuyakho, kodwa izinhlobo ezimbili zokulinganisa ziyahlukahluka ngokuphathelene nokusebenza kahle. Lesi sidakamizwa sinesidingo samadoda anezinga eliphansi le-testosterone noma imizimba yabo ayikwazi ukukhiqiza i-hormone edingeka kakhulu. I-testosterone Undecanoate ingasiza ekuthuthukiseni izici zomzimba wesilisa njengokujula kwezwi, ukusabalalisa amafutha kanye nokwakha imisipha.
I-testosterone engafanelekile yasungulwa ku-1980 yi-Organon Drug Company ehlose ukuhlinzeka ngezidakamizwa ze-testosterone ezingazange zihambe ngesibindi. Futhi, lesi sidakamizwa kwakuwumqondo wokudala i-anabolic androgen steroid (I-AASraw) engasiza ekwelapheni ukukhiqizwa okuphansi kwe-testosterone kumadoda. Kodwa-ke, ukungeniswa kwamanye ama-esters e-testosterone aqina ngokwengeziwe mayelana nokunikeza imiphumela, i-testosterone undecanoate ilahlekelwa ukuthandwa kancane phakathi kwabagqugquzeli bomzimba abaningi nabadlali.
Kanjani Ingabe i-Testosterone i-undecanoate Isebenza
I-testosterone undecanoate idlula ohlelweni lymphatic hhayi isibindi njengamanye ama-steroids. Ngakho-ke, lesi sidakamizwa singene egazini ngaphandle kokubhujiswa noma sithinteka isibindi esisho ukuthi ujabulela imiphumela ngokugcwele. Inqubo ye-steroid eya emzimbeni wakho yenza ihluke kwezinye i-steroid methylated.
I-Testosterone Undecanoate Ukwakha umzimba
I-hormone yezocansi ye-testosterone idlala indima ebalulekile emzimbeni wokulahlekelwa amafutha, ukuthola amandla kanye nokwakha imisipha phakathi kwezinye izici zamadoda. Abagijimi abaningi bezemidlalo nabadlali bomzimba bawasebenzisa ngokunenzuzo ngalesi sidakamizwa ukuthuthukisa imisipha yabo kanye nokuthuthukisa ukusebenza kwabo. Nakuba i-testosterone undecanoate kuthiwa i-steroid ebuthakathaka, ingaba nemiphumela emihle ekwakheni imisipha yakho nokusebenza lapho uthatha isilinganiso esiphezulu esilandelwa nokudla okufanele.
Kodwa-ke, labo abangasebenzisi lesi sidakamizwa ngokufanele bayothola imiphumela emibi engaphathwa uma uxhumana nodokotela wakho ngokuhamba kwesikhathi. I-Testosterone engakhiwe ngendlela engalungile yomzimba kungaba kuhle uma uhamba ngomjovo we-testosterone undecanoate ongayithatha kanye kuphela kuma-10 noma ama-14 amasonto. Kuye ngesimo sakho udokotela uzoklama umthamo kanye nomjikelezo we-testosterone wangemuva ongakwenzeki. Imithi ye-capsules ye-testosterone i-half-life-half-life ishicilelwe usuku, futhi kuzodingeka uthathe umthamo wakho nsuku zonke.
I-Testosterone Undecanoate Izinzuzo
Ezinye zezinzuzo eziyinhloko ze-testosterone ezingenamkhawulo zihlanganisa;
Thuthukisa ukulahlekelwa kwamafutha
Thuthukisa ukuzethemba kwakho
Thuthukisa ukushayela ucansi
Thuthukisa ukuzuza kwe-muscle
I-Testosterone Undecanoate Izilinganiso
Kwabalondolozi bomzimba noma abagijimi umthamo we-testosterone undecanoate uhamba cishe nge-480mg ngosuku. Kodwa-ke, kubasebenzisi besikhathi sokuqala, udokotela anganciphisa ukulinganisa bese ukwandisa isikhathi. Uma unquma ukuhlanganisa lesi sidakamizwa namanye ama-steroids, i-200-250mgs izoba efanelekile. Isidakamizwa kufanele sithathwe ngaphambi kokudla okudlule ngaphambi kokudla kwasekuseni nakusihlwa ngaphambi kokudla.
I-Testosterone Undecanoate nowe
Ungasebenzisa le steroid eceleni kwezinye izinto ezifana ne-deca Durabolin, i-trenbolone ne-promobolan. Uma unquma ukusebenzisa i-andriol nezinye izitho, ngakho-ke kunconywa ukuthi uyisebenzise ngamanani aphansi afana ne-240mg ngosuku. I-andriol izosebenza njengesizinda sokuhlola futhi inikeza ezinye izikhala ithuba lokusebenza kahle ngaphandle kokuthola noma yimiphi imiphumela emibi yocala.
Iviki Andriol Promobolan Aromasin I-Cardarine N2Guard
1 I-250mg / ED 600mgs / ngesonto 10mgs 20mgs / ED I-5caps / ED
2 250mgs / ED 600mgs / ngesonto 10mgs / EOD 20mgs / ED I-5caps / ED
3 250mgs / ED 600mgs / ngesonto 10mgs / EOD 20mgs / ED I-5caps / ED
4 250mgs / ED 600mgs / ngesonto 10mgs / EOD 20mgs / ED I-5caps / ED
5 250mgs / ED 600mgs / ngesonto 10mgs / EOD 20mgs / ED I-5caps / ED
* ED kusho ngosuku noma nsuku zonke
10. I-Turinabol (I-Tbol)
Lesi yisilwane sama-anabolic esasikhiqizwa okokuqala ku-1961 e-East Germany yi-Jenapharm Company yezokwelapha ukuze kutholakale izifo zokulimaza amathambo. Lesi sidakamizwa sathola ukuthandwa ngemuva kokuthi sinikezwe impumelelo ye-East German Olympians impumelelo kuma-1960 kuya ku-1980s. I-Turinabol okwamanje isetshenziselwa abagijimi namalungu omzimba ukuze bathuthukise imizimba yabo nemisipha kanye namandla abadinga ukuwashayela kuyo yonke imisebenzi yabo. Kubanikazi bomzimba, ungakwazi ukufezekisa amathekithi angafinyeleleki uma usebenzisa kahle izidakamizwa.
Kanjani i-Turinabol Isebenza
Imithi ye-turinabol iyatholakala kuphela kwifomu ye-oral capsule. Njengamanje, ayikho ifomu lokujova le steroid. Akekho I-TURINABOL YOKUTHENGA, futhi izidakamizwa zitholakala kuphela kumalabhu angaphansi komhlaba. Isidingo salesi sidakamizwa sikhuphuka sicabangela imiphumela ye-turinabol enikezela kubasebenzisi. Isidakamizwa saziwa ngokuphumelela ekwenzeni ngcono imisipha yamaprotheni synthesis, ukuthuthukisa izinga lokumuncwa kwe-nitrogen emisipha kanye nokwandisa ukukhiqiza kwamaseli abomvu. Umjikelezo we-turinabol uxhomeke kuzidingo zakho, kodwa ungathatha i-50mg nsuku zonke ngesonto noma amasonto amabili. Kodwa-ke, udokotela wakho angakwazi ukuklama umjikelezo wesilinganiso esihle kakhulu ngemva kokucabangela isimo sakho sempilo.
I-Turinabol (i-Tbol) ibonakala njenge-steroid engcono kunazo zonke kubagijimi namalungu omzimba amaningi ngenxa yezinzuzo zayo ezinkulu ekukhuliseni amazinga wamandla nokuthuthukiswa kwemisipha. Ukuhambisana nomuthi ngokudla okulungile nokusebenza okuhle uzoqiniseka ukuthi uthole imiphumela oyifunayo. I-steroid inikeza umzimba wakho ngamaprotheni abalulekile azokwenza imisipha ikhule futhi ishise amafutha omzimba. Ukusebenzisa lesi sidakamizwa, akudingeki ukhathazeke ngemiphumela emibi ye-estrogenic njengokungalahleki, ukugcinwa kwamanzi, nokucindezelwa kwegazi eliphezulu. Ngakho-ke, labo ababhekene nemiphumela emibi bayobe bekhululekile nalesi sidakamizwa.
Ezinye ze-Turinabol izinzuzo ozothokozisa ngokusebenzisa le mithi zihlanganisa;
Thuthukisa amandla amisipha
Nikeza imisipha eqinile
Jabulela imiphumela ngaphandle kokuthola isisindo
Amazinga aphansi wemiphumela emibi
Thuthukisa ukukhiqizwa kwemvelo ka-testosterone hormone
Isilinganiso se-Turinabol esinconywa samadoda yi-20 kuya ku-50gms ngosuku, futhi ungayisebenzisa eceleni kwamanye amavidiyo wemiphumela engcono. Kube nombono ongalungile wokuthi njengomakhi womzimba kufanele usebenzise amanani aphezulu ukuze uthole imiphumela. Abesifazane kufanele bathathe imithi encane ye-turinabol ye-2.5 kuya ku-7.5mgs ngosuku ngoba imithi ephezulu ingaholela ekuziphatheni.
I-Turinabol Ingxenye ukuphila
I-Turinabol (i-Tbol) inephila okwesikhashana samahora we-16. Ngakho kufanele uthathe isisindo sakho kanye ngosuku ngalunye - noma kunjalo, ezinye izici zomzimba zifana nokuhlukanisa umthamo phakathi nesikhathi sehora le-12 okulungile futhi ukugcina amazinga ahle kakhulu egazi.
Le steroid ingasetshenziswa kanye nezinye izinto ezifana ne-Dbol, i-N2Guard, ne-Cardarine ngemiphumela engcono futhi ukunciphisa imiphumela emibi.
Iviki I-Tbol Dbol N2Guard I-Cardarine
1 25mgs / ED 25mgs / ED I-5caps / ED 20mgs / ED
2 25mgs / ED 25mgs / ED I-5caps / ED 20mgs / ED
3 25mgs / ED 25mgs / ED I-5caps / ED 20mgs / ED
4 25mgs / ED 25mgs / ED I-5caps / ED 20mgs / ED
5 25mgs / ED 25mgs / ED I-5caps / ED 20mgs / ED
6 25mgs / ED 25mgs / ED I-5caps / ED 20mgs / ED
* ED imele usuku lonke.
Nguwuphi u-testosterone ester okulungile kuwe?
Manje njengoba unokubona ama-esters ama-testosterone amahle kunawo wonke atholakalayo emakethe, inselelo manje ifika ekunqumeni okulungile kuwe. Abantu banezimpendulo ezihlukile ezidakamizwa ezihlukahlukene, okungenzeka ukuthi kusebenza kumngani wakho kungenzeka ukuthi akuphelele. Abantu banezinhlobo ezahlukene zomzimba, futhi udokotela omuhle uyohlala ehlola isimo sakho kuqala ngaphambi kokukhetha imithi efanele.
Inkinga ye-testosterone idinga ukwelashwa okwenziwe ngabanye ukuze uthole imiphumela oyifunayo. Isibonelo, uma uhamba ngemibono yabantu, abanye bayokutshela ukuthi i-acetate yiyona engcono kakhulu, abanye bayokutshela ukuthi uthenge i-cypionate noma ngisho ne-decanoate. Indlela engcono kakhulu yokukhetha i-estosterone esters efanele ukubona udokotela futhi uchaze inkinga yakho khona-ke uzobeka umuthi olungile.
Ziyini izinketho zokukhetha testosterone esters efanele kuwe?
Iphupho lazo zonke izakhi zomzimba ukuthi libukeka kahle komzimba, ukuqina komzimba jikelele, kanye nemisipha eqinile. Kodwa-ke, ezinye izimo ezifana nokukhiqizwa okuphansi kwe-testosterone emzimbeni kungakuphika ithuba lokuphumelela emsebenzini wakho.
Abaningi bezakhi zomzimba basebenzisa ama-ester testosterone ukuze bafinyelele emisipha abayidingayo ngemva kokuzivocavoca ngamandla. Ngokuvamile, umzimba wakho awunayo testosterone eyanele yokwakha imisipha yakho futhi ikunike amandla owadingayo njengomzimba womzimba. Kusho ukuthi udinga ukuzithuthukisa nge-esters ezifanele.
Ngakho ukhetha kanjani ama-testers e-testosterone?
Njengamanje, imakethe igcwele testosterone esters ehlukahlukene okungenza kube nzima kuwe ukukhetha okungcono kakhulu. Wonke ama-brand athi angcono kakhulu futhi anikele ngesisombululo inkinga yakho. Kodwa-ke, kudingeka uqaphele kakhulu uma ufuna usizo kumsebenzi wezempilo. Cabangela amathiphu alandelayo uma ukhetha ama-testosterone afanelekile;
1. Qonda lokho okudingayo
Ngaphambi kokuba uvakashele udokotela wakho, qala uqonde inkinga yakho. Isibonelo, uma inkinga yakho ingakwazi ukufeza imisipha edingekayo noma ngisho noma ufuna ukushisa amafutha omzimba wakho ozokwenza umsebenzi weDokotela wakho ube lula ukukhomba isidakamizwa esingcono kakhulu kuwe. I-testosterone ester inezithako ezahlukene zokuxazulula inkinga ethile. Ezinye ziphelele kubantu ngaphansi kwemithi yezifo ezahlukene kanti ezinye akufanele zisetshenziswe neminye imithi. Ungenzi iphutha lokuthenga izidakamizwa esitolo sakho esiseduze ngaphandle kwesiqondiso somsebenzi wezempilo. Uzobeka impilo yakho engozini ngoba ungase uthole imiphumela engabangela impilo yakho.
The testosterone izikhukhula ziyeza izinhlobo ezahlukene ezinye zemvelo kanti ezinye izidakamizwa zemithi. Udokotela wakho uzobe esesimweni esihle sokuthola uhlobo olungcono kakhulu emva kokuhlola isimo sakho sempilo. Amandla omzimba wakho kubalulekile uma uthatha le mithi; umzimba wakho ungahle usebenze kahle ngezinye izithako. Nakulokhu ngokuya ngesidingo sakho se-testosterone, udokotela uzokwazi uhlobo olufanele ukukusiza ukuthi ufeze imigomo yakho.
3. Ikhwalithi nokusebenza
I-testosterone ester isebenza ngendlela efanayo, kodwa umehluko uvela ekusebenzeni kwawo. Ama-brand ahlukene ane-half-life, ezinye izidakamizwa zidinga ukuthathwa kanye ngesonto abanye kanye kanye ezinsukwini ze-2 noma ze-3. Izidingo zakho manje zizoqondisa udokotela wakho ekukhetheni umyalelo ogqamile kuwe. Uma ungakhululekile nge-testosterone esters, ungatshela udokotela wakho ukuthi afune isidakamizwa somlomo.
Ithiphu ebaluleke kunazo zonke uma ukhetha noma usebenzisa ama-testosterone boosters ukubandakanya udokotela wakho kuzo zonke izinyathelo. Ukwelapha imiphumela emibi kungabiza futhi ngezinye izikhathi awukwazi ukuguqula isimo. Ungalokothi ubeke phambili intengo uma ukhetha ama-tester e-testosterone esifanele ngoba kungenzeka ukuthola imikhiqizo ephansi uma uhamba ngomkhiqizo oshibhile. Kodwa-ke, ungaphinde uphule ibhange lakho ngezidakamizwa, cabanga ukusebenza nekhwalithi yemiphumela oyilindele.
UDudley, RE, & Constantinides, PP (2018). S. Isicelo se-Patent No. 15 / 723,985.
Guercia, C., Cianciullo, P., & Porte, C. (2017). Ukuhlaziywa kwe-testosterone fatty acid esters ekuguleni kwe-mussels yi-chromatography ye-liquid-resolution high mass spectrometry. I-Steroids, 123, I-67-72.
Chen, FJ, Patel, MV, Fikstad, DT, Zhang, H., & Gillyar, C. (2018). S. Isicelo se-Patent No. 15 / 714,541.
Izinto ze-10 okumelwe wazi ngaphambi kokuthatha i-DMAA Konke Okudingeka Ukwazi Nge-Dianabol Powder Ukudayiswa
I-Rocuronium Bromide powder